ငြိမ်းချမ်းအေး – နာဇီ ပါတီ ဗမာပြည် | MoeMaKa Burmese News & Media
နီဂျူလိုင် - “သမိုင်းဆိုတာ…အ…အောင် သင်နေကြတာလား”
ငြိမ်းချမ်းအေး - ပျော်နေတဲ့ အိပ်မက်ကနေ အပြင် ထွက်ခဲ့ကြပါ
မောင်စွမ်းရည် - ကံဆိုးရှာသူ ဗိုလ်မင်းယောင်
တူမောင်ညို - ကျောင်းသားတွေ မလွန်ဘူး
ငြိမ်းချမ်းအေး – နာဇီ ပါတီ ဗမာပြည်
မိုးမခ။ ဒီဇင်ဘာ ၀၁၊ ၂၀၁၄
(၄) တစ်လင် တစ်မယား စနစ် ကျင့်သုံးခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း (၄) ခုမှာ ဗမာလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အစဉ်အဆက် ယောက်ျားကြီး ဝါဒီ များ အားသာ အလွဲသုံးစားပြုရာ ဖြစ်နေတဲ့ တရားဝင် မယားပြိုင် ယူခွင့် ရှိနေမှု ကို ပဲ ပယ်ဖျက် တစ်လင် တစ်မယား ဥပဒေကိုပဲ ပြဋ္ဌာန်း ဖို့ တောင်းဆိုရပါမယ်။
3 Responses to ငြိမ်းချမ်းအေး – နာဇီ ပါတီ ဗမာပြည်
U San Myint Aung on December 1, 2014 at 10:10 pm
Please explore the other religious and their law.
Htwepaing on December 2, 2014 at 6:49 am
I agreed with you very strongly. everyone has our own choice to believe.
nyeinchanaye81 on December 2, 2014 at 8:30 am
ဆက်စပ်ဆောင်းပါး – ကောင်းဓလေ့တွေ ဆိုးမွေ မဖြစ်စေချင်
ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၁၄